သင်ဟာ Customer Service ကောင်းသူ တစ်ယောက်လား? · MyWorld
သင်ဟာ Customer Service ကောင်းသူ တစ်ယောက်လား?
30 May 00:00 by Haymar SuSuSan
ကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းတူ Competitor တွေကို ကျော်ဖြတ်အနိုင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုကတော့ Customer Service ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မတူညီတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူသားတွေအဖို့ တစ်ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းသာမှုကို လိုလားရှာဖွေကြပါတယ်။ ဒီအချက်ကို အရေးကြီးမှန်းသဘောပေါက်တဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲသူဌေးတွေအားလုံးက (ဘယ်လုပ်ငန်းအတွက်မဆို) ဒီလက်နက်ကို အလေးအနက်ထားအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းပါလျက်နဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းဟာ မျှော်လင့်သလောက် မအောင်မြင်လာဘူးဆိုရင် မိမိကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေက Customer Service ကောင်းသူတွေ ဟုတ်မဟုတ် ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ နည်းလမ်းတွေကတော့….
Product Knowledge (ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း နားလည်မှု)
ကိုယ်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းအကြောင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော သေသေချာချာ တကယ်သိရဲ့လားဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်သူတွေနဲ့သင့်တော်တယ်၊ ဘာအတွက်ကောင်းတယ်၊ ဘယ်အချက်တွေကို ရှောင်ရမယ်စသဖြင့် ကိုယ့် Product အကြောင်းကို အရည်ကျိုသောက်ထားတဲ့အထိ ကျွမ်းကျင်နေရပါမယ်။ လူဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး တွေ့ကရာကို ထိုးရောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မှန်မှန်ကန်ကန် လမ်းညွှန်အကြံပေးပြောဆိုနိုင်ခြင်းဟာ Customer Service ရဲ့ အဓိကသော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်သူအားလုံးကို ကိုယ့်ဘက်ကဆက်ဆံရေးဟာ တတန်းတည်းဖြစ်နေသင့်ပါတယ်။ “ဟယ် ဝတ်ထားတာကြီးက စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ ဝယ်နိုင်မယ့်ပုံလည်းမပေါ်ဘူး” ဆိုပြီး ဝတ်ကျေတန်းကျေ မေးတစ်ခွန်း၊ ဖြေတစ်ခွန်းသာလုပ်နေရင်တော့ အဲဒီ Customer Service Level က Zero လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒီလိုအရောင်းသမားတွေကြောင့် တကယ်တမ်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားမိပေမယ့် မဝယ်ဘဲ လှည့်ပြန်သွားတဲ့ Customer တွေ ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ရှိနေပြီလဲဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
Complaint တက်ခံရတဲ့အခါ ဘယ်သူမဆို ပထမဆုံးစိတ်ခံစားချက်က စိတ်တိုကြပါတယ်။ အဲဒီခဏမှာ ထောင်းခနဲထွက်လာတဲ့ဒေါသကို ထိန်းနိုင်တဲ့ Level ပေါ်မူတည်ပြီး Customer Service ကောင်း၊ မကောင်းကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကျပ်ဖိုးပဲဝယ်ဝယ်၊ တစ်သိန်းဖိုးပဲဝယ်ဝယ် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးတဲ့အခါ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုသာ ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင် ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ ကိုယ်မဟုတ်ဘူး။ Company ကို ကိုယ်စားပြုနေတယ်ဆိုတာ နှလုံးသွင်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အချက် (၃) ချက်ဟာ Customer Service နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထားရှိရမယ့် စိတ်သဘောထားကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့လိုက်နာရမယ့် Physical နဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု၊ ယဉ်ကျေးသောအပြောအဆို၊ အပြုံးနဲ့ဖော်ရွေမှု စတဲ့အချက်တွေကိုတော့ Customer Service လို့ဆိုလိုက်ရင် မပါမဖြစ် ထည့်သွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။